Kenya oo qorshe cusub la damacsan Soomaalida deegaanka ah ee ‘cuntada u galay’ qaxootiga | Baydhabo Online
Kenya waxaa ku yaala xerooyin ay ku jiraan boqolaal kun oo qaxooti Soomaali ah, kuwaas oo kasoo qaxay Soomaaliya. Balse dhammaantood ma ahan kuwa ka wada yimid Soomaaliya.
Waxaa jira dad badan oo haysta muwaadhinimada Kenya, kana soo jeeda deegaanada xerooyinka laga furey ee Waqooyi Bari ayaa galay diiwaanga qaxootiga si ay u helaan cunto ama waxbarasho sida uu sheegayo xoghayaha joogsada ee laanta socdaalka Kenya Gordon Kilahangwa.
Balse taas waxa ay kala kulmaan dhibaato aysan markii hore kasii fikirin, taas oo ah uu qalqal galo aqoonsigoodii muwaadhinimo ee Kenya, taasna ay ku waayaan adeegyo badan oo ay dowladda bixiso oo ay xaq u leeyihiin.
Hadda dowladda Kenya waxa ay shaacisay qorshe cusub oo ay dadkaas uga saarayso diiwaanka qaxootiga, kuna masaxayso farahooda oo lagu xareeyay habka kaydka xogta rasmiga ah ee dowladda Kenya.
Mr Gordon Kilahangwa oo hadlay ayaa yiri ”Waxaannu ka wada hadalnay dadka labada jeer diiwaangashan ama farahooda ku jira qaxootiga, waa arrin dhab ah, waxaana rabaa inaan uga hadlo si aan labalabeys lahayn. Waxaannu heynaa tiro kumanaan ah oo ay ka mid yihiin muwaadaniin u dhalshay Kenya kuwaas oo aannu dhihi karno siyaabo kale ayay qaxootiga u galeen balse waa muwaadiniin u dhashay Kenya. Haddanase ka mid noqday qaxootida si ay uga faa’ideystaan waxbarashada ama si ay u helaan raashiin”.
Wuxuu intaas raaciyay ” Waxaan sidoo kale helnay qaxooti, qaxooti Soomaali ah oo ku sugan xeradan sidoo kale heysta warqadaha aqoonsigayaga, waana kumanaan.Dowladda waxay ku guda jirtaa , waxaan rabaa inaan u sheego wakiilada baarlamaanka, waxaan filayaa khamiistii ayay ahayd markaan la kulannay wakiilka UNHCR ee Kenya la marwo Fathia “.
Arrintan waxa ay ahayd mid marar aad u badan ay cabasho ka dhiibtaan dadka deegaanka iyo mas’uuliyiinta halkaas laga soo doorto.